Ụbọchị My Pet » Isii Iwu Iji Nyere Gị Aka Jikwaa Onye Inyeaka Gị si Pet
site Kayla Pierce
emelitere ikpeazụ: Ka. 27 2020 | 2 min agụ
Ọ bụrụ na ị na-aga na-akpa na a Pita nwe, ị na-aga na-akpa na-ahụrụ n'anya onye nwe Pita. Ma ọ ha umengwụ iri na atọ afọ Golden Retriever ha ma ọ bụ oké ụzụ cockatiel, isi ihe na-obi ha dị site na ha anụmanụ.
Dị nnọọ ka ị ga-akwanyere òtù ọlụlụ ọhụrụ gị na ókè nke ọhụrụ gị mmekọrịta, otú kwesịrị ị na-akwanyere ha anu ulo na otú onye gị na-eweta ha.
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ enwetatụbeghị n'ime a mbedo na onye bụ onye nwere a Pita, na-ike gwụrụ nke na-agbasa ndị a dị mfe iwu.
Anwala ngalaba-nne na nna. Ọ bụrụ na gị na onye òtù ọlụlụ na-adịghị cheta na ya Chihuahua barks na onyinyo, mgbe ahụ ekwesịghịkwa ị. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-a ụwa-klas anụmanụ ọzụzụ, ha ji mere enyi bụghị nke gị na-agaghị ruo mgbe i nwere nke ukwuu zuru ezu na chere si (Olileanya) mkparịta ụka.
Unu anwala iweghara ọnọdụ. A mmekọrịta ya na ha Pita bụ a mara mma ihe. Ọ dịkwa mma siri, pụrụ iche na ike akwụ. Ọ bụrụ na gị ụbọchị mee ya Monday ụtụtụ ruo ogologo ije na ya pup, ịjụ isonyere ya na ụfọdụ kọfị, ghara ikwu ya kpam kpam. Ọ bụrụ na ị ga-arahụ n'ebe ha ụlọ na nke mbụ chọpụta na ha oversized cat ehi ụra n'ihe ndina, arụ ọrụ na gburugburu cat. Fair bụ mma na ọ bụ na na bed ogologo oge tupu ị.
Don "T-eme ka fun nke ha. -Akpa a cat nwaanyị? Ndi gị enyi nwoke egosi foto nke ya gerbil onye ọ bụla o zutere? -Eme onye gị na ejiji ya Chihuahua kwa-ututu, ọ bụ ezie na ọ bụ nwata? Nke a abụghị gị ebe-ekpe ikpe. Ohere inweta bụ, i nwere ụfọdụ ememe na gị Pita na iyi onye iberibe ha, otú na-njakịrị na nke kacha nta.
KA agụnye Pita. Animals dị nnọọ nkọ ndị mmadụ agwa. Ọ bụrụ na i nwere ike inwe n'ime Pita ọma graces, Ohere inweta bụ ha nwe ga-eso uwe. Chọta ihe i nwere ike ime ọnụ na-ahụrụ n'anya enyi na enyi.
Ọ na-agụnye gị ịzụ. N'ihi na ọtụtụ ndị kpọrọ, anu ulo dị ka ụmụ. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ma ọ bụrụ na gị na-eme n'ọdịnihu bụ na-egbuke egbuke ọnụ, ka gị anu ulo izute ma hụ otú ha si emekọrịta. Ọ bụrụ na ha na-adịghị amasị onye ọ bụla ọzọ na mbụ, na-etinye na mgbalị iji nweta ha n'ebe. Ọ bụghị naanị na ọ ga-adị mfe, ọ ga-abụ oké ụzọ na-ewetara gị abụọ nso ná mmekọrịta unu.
Eme ka a dị ebube ogbugbu. Ya mere, ma eleghị anya, ị na-achọghị ka ha Pita mkpado tinyere na bụla ụbọchị, ma mgbalị dị ihe ka mkpa. All onye gị kwesịrị ịma bụ na ọ bụrụ na ị daa na ịhụnanya na ha otu ụbọchị, ị ga-ha n'anya Pita, kwa. Usọrọ ha ụbọchị ọmụmụ, ma ọ bụ zụta ha emeso. Were ha ka ogige site onwe gị. The obere ihe mgbe niile gụọ, ma mgbe ọ na-abịa anu ulo, mgbe ụfọdụ na nnukwu ihe na-arụ ọrụ ka mma ọbụna.
12 Atụmatụ Nọrọ upbeat Mgbe Online dịwara